Kitapo rongony paosy zipo miady amin'ny zaza
Kitapo fanoherana ny zipper zaza dia toa tsara tarehy sy kanto. Mba hahazoana ity kitapo zipper slider ity dia mila manafatra zipper manokana isika ary mila mampiditra ilay slider ao anaty kitapo amin'ny tanana. Handany fotoana sy vola bebe kokoa izany. Saingy tena mendrika izany.
Vonona ny handefa ny kitapo rongony habe rehetra
Manao asa OEM indrindra izahay, izay midika fa hamokatra ny kitapo arakaraka ny karazana kitapo takiana aminao, habe, fitaovana, hateviny, pirinty ary habetsany. Raha mbola misy filàna lehibe kokoa vonona handefa kitapo, avy eo mifanena amin'ny tsena izahay, ary manandrana ny tsara indrindra vitantsika mba hanao ny endrika sy kalitao tsara indrindra ho anao.
Kitapom-batsy fanoherana namboarina ho an'ny zaza namboarina
Nahavita habe samihafa amin'ny paosy paompy maro izahay, kitapo kely ny sasany, hapetraky ny olona ao anatiny ny vokariny. Raha toa ny mpanjifa sasany te-hanao kitapo kely kokoa, toy ny 9''X12 '', toy ny kitapo fiantsenana. Hapetrany ao anaty magazay ny kitapo, raha vao misy mpividy mandray kitapo kely isan-karazany dia hapetrany ao anatin'ity kitapo fivarotana lehibe ity ny kitapo kely rehetra ary hamehezany izany araka ny takian'ny governemanta.
Kitapo rongony rongony miady amin'ny zipper zaza
Double zipper dia karazana zipper manokana izay afaka miaro ny ankizy amin'ny vokatra ao anaty kitapo, misy fisokafana sandoka ao ambadiky ny kitapo, raha te hanokatra ny kitapo ianao dia mila misintona ny sosona anoloana sy ny lamosina miaraka amin'izay , raha tsy izany dia tsy azo sokafana izy io, malaza be amin'ny kitapo rongony.
Namboarina manokana gony rongony azo ahodina
Ny kitapo hidin-zip dia miorina no karazana kitapo be mpampiasa indrindra amin'ny famonosana rongony, tsy maninona na voninkazo na kafe, siramamy, cookies misy manampy amin'ny CBD na THC. Ny ankamaroan'ny mpanjifa dia tia glossy ambonin'ny varavarankely, ary ankehitriny dia mahita ny fanontana UV dia fironana vaovao.
Kitapo rongony rongony ambongadiny
Ho an'ny rongony, toy ny voninkazo maina, mazàna ny olona misafidy kitapo cos mila toerana malalaka kokoa. Raha ho an'ny kapsily sasany, ny kitapo sachet kely dia ho safidy tsara kokoa. Afaka manao kitapo 4 * 5cm kely indrindra isika, raha ny habe iraisana dia 5 * 12cm, toy ny kitapo Carttel etsy ambany. Na dia ho an'ny kitapo rongony kely aza dia azonao atao ny manao matt, glossy na UV, miaraka amin'ny foil na tsy misy, miaraka am-baravarankely, zipper, sns.